Na gam akporo N ị nwere ike ịzaghachi ozi ziri ezi na Twitter | Gam akporosis
Anyị niile maara atụmatụ a nke ọma maka WhatsApp nke na-adịbeghị anya jikọtara ya ka anyị wee nwee ike zaghachi ozi site na otu ngosi na ọkwa ọkwa ma ọ bụ site na mkpọchi mkpọchi nke ọdụ anyị. Ihe na-azọpụta anyị bụ imeghe ngwa iji mee ihe iji zaghachi ozi ngwa ngwa.
Arụ ọrụ dịkwa dị na gam akporo N na anyị maara ya dị ka kpọmkwem nzaghachi iji zipu ozi ngwa ngwa. Hangouts, Facebook Messenger, na WhatsApp bụ ụfọdụ ngwa ndị na-akwado ihe a, ma taa bụ ụbọchị Twitter iji sonyere ndị ọzọ. Mgbe melite ngwa ahụ na Design Design ma bụrụ ngwa ka mma, ekwuru eziokwu, ugbua ọ na-etinye atụmatụ dị mma maka gam akporo N nke ahụ bya akpọe Nutella.
Yabụ ugbu a, ị gbakwunyela bọtịnụ zaghachi ngwa ngwa iji duzie ozi sitere na Twitter natara site na ọkwa ahụ. Ekwesịrị ikwu na ọ na-arụ ọrụ maka ozi ziri ezi, yabụ enweghị nhọrọ ịghagharị ma ọ bụ tweet sitere na atụmatụ a.
Arụ ọrụ nke ga-abata n'aka maka ndị ọrụ na-ejikarị kwa ụbọchị Twitter na a na-eduzi ya iji melite ahụmịhe ojiji na nkwukọrịta n'etiti mmadụ abụọ. Ndị nwere elele nwere wear gam akporo ga-enwekwa ike iji akụkụ ọhụụ a mee ihe site na ịnwe ike ịkọwa nzaghachi ma ọ bụ dọpụta emojis site na nkwojiaka.
N'oge a anyị amaghị ụdị nke Twitter nke na-enye atụmatụ a, mana ọ bụ naanị ndị ahụ nwere gam akporo N Ha ga-enwe ike iji ya ebe ndị ọzọ fọdụrụ maka nsụgharị ikpeazụ na ndị nrụpụta wepụta mmelite ahụ, nke ga-egbu oge anyị inwe ike iji ọrụ a dị ka ọ dị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Na gam akporo N ị nwere ike ịzaghachi ozi sitere na Twitter site na nzaghachi ọsọ ọsọ
Onye OnePlus 3 nwere ike iji ụgwọ ngwa ngwa "Dash Charge" jiri eriri USB na nkwụnye ọkụ
OnePlus agaghị ebupụta ekwentị ọ bụla n'afọ a nke na-ebelata ọnụahịa nke OnePlus 3